Rohan'ny J-147 (1146963-51-0) mpanamboatra - Phcoker Chemical
SKU: 1146963-51-0 Sokajy: Drug Smart
Rohina J-147 roahina (1146963-51-0) video
Rohan'ny J-147 (1146963-51-0) Description
Ny Rohanao J-147 Rohina dia fanafody fanandramana miaraka amin'ny vokatra voakasik'izany amin'ny aretina Alzheimer sy ny fahanterana amin'ny modely amin'ny fampiasana ny fiakaran'ny safidy. Io dia vokatry ny curcumin sy ny kernel izay manana neurogenic sy neuroprotective, izay vao haingana, mba hikarakarana ny fepetra nerodegenerative izay mifandraika amin'ny fahanterana Ny fiantraikany amin'ny lalana maro izay tafiditra ao anatin'io aretina miteraka aretim-pivalanana io.
Ny roapolo J-147 roapolo dia efa vonona ho an'ny fitsapam-pitsaboana amin'ny olombelona. Ankehitriny, ny mpahay siansa Salk dia namaha ilay piozila amin'ny inona, marina, J147. Ao amin'ny taratasy iray navoakan'ny January 7, 2018, ao amin'ny gazety fanaovan-gazety Aging, dia mitatitra izy ireo fa ny zava-mahadomelina dia mifandray amin'ny proteinina iray hita amin'ny mitochondria, ny angovo azo avy amin'ny sela. Ho setrin'izany, nasehon'izy ireo fa miteraka sela efa antitra, totozy sy lalitra ny tanora.
Rohina J-147 roahina (1146963-51-0) Specifications
Product Name Rohan'ny J-147
Anarana simika N- (2,4-Dimethylphenyl) -2,2,2-trifluoro-N '- [(E) - (3-methoxyphenyl) methylene] acetohydrazide
Drug Class Tsy misy angona azo atao
molekiolan'ny Formula C18H17F3N2O2
molekiolan'ny Wvalo 350.341 g / mol
Solubility Fahamendrehan'ny rano: 0.000115 mg / mL
Rohan'ny J-147 Application ny zava-mahadomelina mifandraika amin'ny vokatry ny tatitra voakasik'io aretina Alzheimer sy ny fahanterana amin'ny modely maosin'ny fahanterana.